I-TechGameBox - Umhlaba Wabadlali
Buka i-Nintendo Direct yanamuhla lapha
1 July 2022 by U-Alistair McDonald
Ekugcineni, sinesethi efanele ye-Nintendo Direct kushejuli. Lalela ngo-2pm ngesikhathi sase-UK ngohlelo lwesimemezelo oluthatha imizuzu engu-25, olugxile emidlalweni yezinkampani zangaphandle. Lindela ukubukeka kwe-Shintsha imidlalo eyenziwe ezinye izinkampani ngaphandle kwe-Nintendo - ngakho-ke, alikho ithemba ngezindaba ze-Zelda: Breath of the Wild 2 lapha. umthombo
Izigaba Izindaba Shiya amazwana
U-Hideo Kojima wake wahlela iphrojekthi ye-superhero efana ne-Amazon's The Boys
U-Hideo Kojima kaDeath Stranding uveze ukuthi wake wapheka iphrojekthi efana nochungechunge lwamaqhawe e-Amazon Abafana. "Ngiyekile ngemuva kweziqephu ezintathu zesizini yokuqala," kubhala uKojima kuTwitter, exoxa ngochungechunge. “Bengicabanga ukuthi ngizolubuka lonke uhlelo. Empeleni, ngibuke iziqephu ezimbalwa ezethulwe e… Funda kabanzi
Imboni yegeyimu yevidiyo yase-Québec izothintwa umthetho wolimi oyimpikiswano
Izinkampani zamageyimu evidiyo e-Québec zizothintwa umthetho omusha wolimi oyimpikiswano. Inhloso yoMthethosivivinywa wama-96 ukuqinisa imithetho yezilimi zesifundazwe esikhuluma isiFulentshi, ukuqinisekisa ukuthi isiFulentshi siwulimi olukhulunywa kukho konke kusukela kwezamabhizinisi kuya kwezokunakekelwa kwezempilo. Kodwa-ke, kusatshwa ukuthi lokhu kuzoxosha izikhulumi ezingezona isiFulentshi embonini enkulu yemidlalo yevidiyo yase-Québec. … Funda kabanzi
Isikhumbuzi se-Blade Runner esifakwe ngokujulile manje sihlanganisa inguqulo engabuyekeziwe kuSteam
U-Dev uthumela isithombe sokuqala se-PS VR 2 endle, asisuse
Sonke siyazi ukuthi isendleleni, kodwa i-PS VR2 iseyimpicabadala kithi esingazi ngokusebenza kwangaphakathi kwaSony. Kodwa-ke, unjiniyela oyedwa wabelane (futhi wasusa ngokushesha) isithombe se-PS VR2 esibekwe emhlabeni wangempela. Isithombe sivela ku-Bit ... Funda kabanzi
Iziqephu ezintsha ze-PC ye-Resident Evil zilimaza okubonwayo futhi zishaya ukusebenza kanzima
30 June 2022 by U-Alistair McDonald
Anginakho okuningi okuhle engingakusho, kodwa akungabazeki ngakho: ukwesekwa kokulandela umkhondo kunikeza ukuthuthukiswa kwekhwalithi iyonke, ikakhulukazi ngoba ukuboniswa kwe-RT kuthatha indawo yokuboniswa kwesikhala sesikrini okubi okutholakala kunguqulo endala. Ukukhanya komhlaba okulandelwa uRay nakho kuyiphuzu elihle lokuhlanganisa, esikhundleni sokuvaleka kwe-ambient kwesikrini ngesikhala esinembe kakhulu ... Funda kabanzi
I-Harvestella ibukeka sengathi i-Final Fantasy ihlangana ne-Stardew Valley
I-Harvestella iyimpilo entsha sha ye-sim RPG evela ku-Square Enix eza ku-Switch and Steam ngoNovemba. I-Final Fantasy ihlangana ne-Stardew Valley, ngokudlalwa kwegeyimu okuhlanganisa ukutshala izitshalo, ukwenza ubungane nabantu basedolobheni, nokuhlola imigodi. I-Concept art ibhalwe ngu-Isamu Kamikokuryo wodumo lwe-Final Fantasy 12, futhi umculo ka-Go Shiina ochungechungeni lwe-Tales. … Funda kabanzi
I-Gmail ye-Android, i-iOS yengeza inkomba elula ethi 'Isitoreji esisetshenzisiwe'
30 June 2022 by inkomba
Kuwebhu, i-Gmail kudala yaphawula ukuthi singakanani isitoreji osisebenzisayo ezansi ekhasini. Inkomba ethi “Isitoreji esisetshenzisiwe” manje isiku-Gmail ye-Android ne-iOS ukuze ikusindise ekudingeni ukuvula olunye uhlelo lokusebenza noma iwebhusayithi yokuphatha isikhala. Okuningi…. Isihloko sokuqala
Izigaba TECH Shiya amazwana
I-RIP RTX 3080 12GB - bekungafanele ngabe ukhona kwasekuqaleni
I-Nvidia kucatshangwa ukuthi imise ukukhiqizwa kwekhadi layo lemifanekiso le-GeForce RTX 3080 12GB, okuhlukile okunamandla kwe-RTX 3080 GPU yasekuqaleni. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi lesi akusona isimemezelo esisemthethweni ngakho-ke thatha lolu lwazi ngosawoti omncane, kodwa umsebenzisi we-Twitter kanye nomshisekeli we-GPU @Zed_Wang uthi ikhadi ngeke ... Funda kabanzi
Izigaba Ukubukezwa Shiya amazwana
I-Asus ROG Ucingo 6 oluza ngoJulayi 5 ngokumelana namanzi kanye nomunye umlandeli wokupholisa ohlanyayo
Uhlelo lwe-Asus ROG Ucingo lugcwele izinketho ezinamandla futhi ezenziwe kahle, futhi imodeli entsha isiseduze. Ngokuhambisana nokuvuza okuthile, manje sesinokubukeka njengosuku lokukhishwa kwe-Asus ROG Ucingo 6. more... Isihloko sokuqala
I-Nintendo Direct Mini: i-Persona 5 Royal, i-Persona 4 yegolide, ne-Persona 3 ephathekayo konke okuza ukushintsha
INintendo Shintsha kube yindaba yamahemuhemu amaningi, amaningi eminyakeni edlule, kepha awekho abephikelela njengezwi kangangokuthi uchungechunge lwe-Persona luzofika kukhonsoli. Ngesikhathi sokusakazwa kwakamuva kweNintendo Direct Mini, lawo mahemuhemu agcina eyiqiniso. I-trio ye-Persona 5 Royal, i-Persona 4 Golden, kanye ... Funda kabanzi
Izigaba Nintendo, Ukubukezwa Shiya amazwana
I-Nintendo Direct Mini: Phila Idemo Ebukhoma Iyatholakala Manje ku-eShop
I-Live A Live, i-SNES RPG yenganekwane engakaze ithole ukwenziwa kwasendaweni okusemthethweni lapha eNtshonalanga, izoza ku-Nintendo Switch ngoJulayi 22. Uma ubunethemba lokunikeza igeyimu isivunguvungu ngaphambi kokuthi ingene ezitolo, u-Nintendo ukuphathele lokhu: kunedemo ebukhoma ku-eShop njengamanje. Thatha isihlalo... Funda kabanzi
Izigaba Nintendo Shiya amazwana
I-Callisto Protocol izoba umdlalo omubi kakhulu kune-Dead Space
UGlen Schofield uzizwa ekhululekile. Uyabona, sekube amasonto ambalwa ayisivunguvungu kumdali we-Dead Space, ithimba lakhe elisha ekugcineni selikhiphe amazwibela e-Calisto Protocol yalo elisesitayeleni, eshelelayo futhi enyantisayo ku-Geoff Keighley's Summer Games Fest - okuvezwayo okumaka umehluko omkhulu phakathi kwe… Funda kabanzi
ikhasi1 ikhasi2 ... ikhasi3,968 Olandelayo →
© 2022 TechGameBox • Yakhiwe nge GeneratePress